२८ वाणिज्य बैंक : कसको नाफा बढ्यो ? कसको घट्यो ? – Banking Khabar
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाल बैंक लिमिटेडले सबैभन्दा धेरै मुनाफा आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मुनाफामा गिरावट आएको भए तापनि अन्य बैंकहरुको तुलनामा भने नेपाल बैंकको नाफा सबैभन्दा बढी हो । त्यस्तै, सिभिल बैंकको मुनाफा सबैभन्दा धेरै प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जनता बैंकले सबैभन्दा कम नाफा कमाएको छ भने मेगा बैंकको नाफा सबैभन्दा धेरै प्रतिशतले घटेको छ । समग्रमा, २८ वटै वाणिज्य बैंकको विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
अन्य ११ ​बैंकले पनि बढाए नाफा